DHAMMA VADI AUNG MYAY MINGALAR MONASTERY: 2009-04-26
သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ၊
သဗ္ဗရသံ ဓမ္မရသော ဇိနာတိ။
သဗ္ဗရတိံဓမ္မရတိ ဇိနာတိ၊
တဏှက္ခယော သဗ္ဗဒုက္ခံ ဇိနာတိ။
ဒါနအားလုံးကို ဓမ္မဒါနက အောင်နိုင်၏။
အရသာအားလုံးကို တရားအရသာက အောင်နိုင်၏။
မွေ့လျော်ဖွယ်အားလုံးကို တရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းက အောင်နိုင်၏။
ဒုက္ခအားလုံးကို တဏှာကုန်ခြင်းက အောင်နိုင်၏။
စိရံ တိဋ္ဌတု သဒ္ဓမ္မော၊ ဓမ္မေ ဟောန္တုသဂါရဝါ။
ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ သာသနာတော်သည်
သဒ္ဓမ္မသုံးဖြာ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း ရှိကြပါစေကုန်သတည်း။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာအတွက်တော့၊ ငါပါအသက်ဆုံးစေမည်၊ နောက်မဆုတ်ပေါင်၊
ကုသိုလ်ရေးမို့ ၊ ကြိုးစားမည်၊
ဒို့ လဲကြိုးစားမည်။<?xml:namespace prefix = o />
ဆရာတော်ဦးကောမလ ရွှေမဂ္ဂင်စာသင်တိုက် SHWE MEGGIN SARTHIN TEIK
Nyaung Dome Sayadaw Gyi
မာလုကျပုတ္တသုတ်တရားတော်၁၇-၂ဝ
Rensselaer မြို့ ( Albany, New York )တွင်တည်ရှိသော ဓမ္မဝါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးဣဿရိယက ဦးဆောင်ပြီး လူငယ်များ ဘာသာ၊သာသနာ နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ဝင်လာစေရန် အတွက်၎င်း၊ ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်း၊
သာသနာပြုရန်ကြွရောက်လာကြသော အာဂန္တုရဟန်းတော်များ ချမ်းသာစွာသီတင်းသုံးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဓမ္မာရုံ နှင့် တရားဟောခန်းမများကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကလည်းမိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှ အလှူတော်ငွေ၊ လုပ်အားအလှူတို့ကိုတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊စုပေါင်း ၍ဖြစ်စေပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Dhammavadi Aungmyay Mingala Temple
Tel: 646-284-2763 (mobile)
Tel: 518-772-1634 (Monastery)..
Payable to.......U Eithareya.
ပထမအကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အော်ဘနီ၊ ရန်ဆဲလ်လီယာမြို့၊ ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း တွင်
၂၀၁၀ခု မတ်လ(၁၇) မှ (၂၀)ရက်အထိ၊ (၃)ရက် ကျင်းပပူဇော်အပ်သော ပထမအကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ
ပထမနေ့ ..... မနက်ပိုင်း.....(ဖွင့်ပွဲ)
03/20/11 11:32AM (ပိတ်ပွဲ / အောင်ပွဲ)
Ashin Kheminda (Dhamma Vadi Aungmyay Monastery , Albany , New York)
အရှင် ခေမိန္ဒ ( ဓမ္မဝါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း - (Albany , New York) ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ ၁။ အရတော်စွ လူ့ဘဝ
Ashin Pyanyarwantha , (Dhamma Vadi Aungmyay Monastery , Albany , New York)
အရှင်ပညာဝံသ ( ဓမ္မဝါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း - (Albany , New York) ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
Albany, New York ဓမ္မ၀ါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း
အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ရက်များနှင့် နှစ်သစ်မင်္ဂလာရက်များ ၌
ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဖရီးမောင့်မြုိ့ မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရကျောင်းမှ
ဆရာတော် အရှင်ဃောသိတာဘိဝံသ ဟောကြားပြသတော်မူသော
မိုးကုတ်မြို့  ညောင်သုံးပင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ပဓာနနာယက (တောင်တန်းသာသနာပြု)သုံးဘွဲ့ရ ဓမ္မာစရိယ သာသနဝိသောဓနီအဖွဲ့ (ဥက္ကဌ)နိုင်ငံတော်ဗဟိုဝန်ဆောင်သဒ္မမ္မဇောတိကဓဇ မဟာသဒ္မမ္မဇောတိကဓဇ ဂန္ထ ဝါစကပဏ္ဍိတ သကျသီဟပရိယတ္တိသာသနဟိတဓရ ဂုဏဝိသိဌ
မိုးကုတ်မြို့ညောင်သုံးပင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရာဘိဝံသ ၏
ခက်ခဲနက်နဲသောမြတ်ပဌာန်းဒေသနာတရားတော်များကို လွယ်ကူ၊နားလည်၊နှုတ်တက်ရစေရန် ရည်ရွယ်၍
Albany, New York , Rensselear မြို့ ဓမ္မဝါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်းတိုက် ၌ ညစဉ်သင်ကြားပို့ချဟောပြောချက်များ.........
မိုးကုတ်မြို့ ညောင်သုံးပင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာနနာယက (တောင်တန်းသာသနာပြု) သုံးဘွဲ့ရ ဓမ္မာစရိယ သာသနဝိသောဓနီအဖွဲ့ (ဥက္ကဌ) နိုင်ငံတော်ဗဟိုဝန်ဆောင်
သဒ္မမ္မဇောတိကဓဇ မဟာသဒ္မမ္မဇောတိကဓဇ ဂန္ထ ဝါစကပဏ္ဍိတ
Moe Goke Nyaung Thone Pin Sayadaw
မဟာစည်ရိပ်သာများ၏ နာယက ဓမ္မာစရိယ ဒီဃဘာဏက (ပိဋကတစ်ပုံဆောင်) စိန်စည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသညောဘာသ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း ဟောကြားတော်မူသော တရား တော်များ
မိုးကုတ်ဝိပဿနာပဓာနနာယက ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းပြSayadaw U Tayzeinda
မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်နာယက၊ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ သွေးဆေးကန်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇိန္ဒ (B.Sc , Physics) ‎အမေရိကန်ပြည်အတွင်း ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်အသစ်များ နာယူလိုပါက ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ►►►တရားနာရန်
အနီးစခန်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတ၏ တရားတော်များ
SHWE MEGGIN SAYADAW'S NEW DHAMMA TALKSရွှေမဂ္ဂင် ဆရာတော် ဦးကောမလ ၏ တရားတော် အသစ် များ
Prayers and water festival herald Burmese New Year
First published: Saturday, April 25, 2009
Abbot U Eithareya: Head monk at the Burmese Aungmyay Minglar Buddhist Monastery in Rensselaer.
Background: Born in Burma (now called Myanmar), studied Buddhism at age 10, becameamonk when he was 20 and is now 53. Came to the United States in 2003, was invited by the local Burmese refugee community to set upatemple. Community members pitched in to purchaseathree-story house on Broadway in Rensselaer foratemple and monastery.
Assistance appreciated: This Q&A was made possible by temple members Aye Aye Cho, temporary monk Zaw Myat Min, both of the U.S. Committee for Refugees and Immigrants, as well as senior monk Ven. Kheminda, who interpreted the following comments by the abbot and other monks.
Burmese New Year was April 16. Tell us about the tradition.
We celebrate in April because mostly at this time our country is very hot, so the heat makes everybody tired. We wish everybody health, pray for and throw water on each other. That's why it's also called the Water Festival.
How was the local celebration?
We began Friday and didalot of things for the entire week. Early Saturday, Burmese people offered food to the Buddha, monks and nuns. By 10:30 a.m., they offered lunch, treated others and donated money or things to the monks. The special monks preached, other monks and nuns prayed forapeaceful life. We shared our merit, our good deeds, with others.
Temporary monks – two nuns and four novices – came to the monastery to learn and meditate for one week. People can enter at any time, but we do arrange for special celebrations. Males younger than 19 took the first step by becoming novices, men 20 and older entered as monks. Women can begin at any age.
A monk has to cultivate loving kindness. We can give instruction on how to live peacefully and give counseling for people withaphysical or emotional problem.
How does the monastery contribute to the community?
There are, right now, 26 core people providing donations every month, whatever they can afford, because they are devoted to the growth of this monastery.
We can celebrate our culture or traditional ceremonies, regardless of any religion. Even though inside the Burmese community we may have different religions, we have the same culture so anyone can come over here, join and we share food. When Burmese who are not Buddhist do celebrations for their religions, we are also invited; we go there and we have fun. We do this because we want our kids to be introduced to our culture and our religions so that in the future they know where we are from, where their parents are from and what their parents believe. We believe it'sagood source to compare religions when they grow up.
— Sharon Hong
Posted by Dhamma Vadi Aung Myay Mingalar Monastery at 7:58 PM0comments Links to this post
လယ်တီ ဆုံးမ စာ
ငါးအာရုံဘင်အစု၊ ခင်မှုနဲ့နေ့ကုန်။ နင်ယခုမေ့ပုံလို၊ တွေ့မကြုံစခန်း။
ပါယ်လေးဝ သောကဘုံမှာ၊ မျောရရုံ ရှိတော့ခမန်း။
အောက်ဝီစိ သောင်အငူမှာ၊ ခေါင်းမပြူစတမ်း။
နှစ်အရှည် နစ်မည်လမ်းကိုလ၊ နင်မျှော်စမ်း နင့်ကိုယ်။
ဒေသနာထင်အလင်းရယ်နှင့်၊ နင့်အဖျင့် ပိုထက်သာပို။
သည်လောဘ စရိုက်အိုကို၊ မလိုက်လို ရှောင်ပစ်လို့၊
နောင်အသစ် တကယ်ပြင်လျှင်၊ ကောင်းဘို့အစဉ်။
ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင်၊ အမိုက်နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။
ခွင့်သာဆဲမှ မခဲချင်လျှင် အလွဲနင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။
ခွင့်သာတုန်းမှ မရုန်းချင်လျှင် အရှုံးနင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။
Dhamma Vadi Aung Myay Mingalar Monastery
Rensselaer., New York, United States
Sayadaw U Eithareya: Head monk at the Burmese Aungmyay Minglar Buddhist Monastery in Rensselaer. Background: Born in Burma (now called Myanmar), studied Buddhism at age 10, becameamonk when he was 20 and is now 53. Came to the United States in 2003.